Digital Twin - Philosophy momba ny revolisiona nomerika vaovao - Geofumadas
Febroary, 2020 fanavaozana
Ny antsasak'ireo izay namaky ity lahatsoratra ity dia nateraka tamin'ny teknolojia teny an-tànany, nahazatra ny fanovana nomerika araka ny nomena. Amin'ny antsasany hafa dia isika no nanatri-maso ny fahatongavan'ny vanim-potoanan'ny solosaina nefa tsy nangataka alalana; mandaka am-baravarana ary mamadika ny zavatra nataonay ho boky, taratasy, na toeram-pitsaboana primitive izay zara raha afaka mamaly ny firaketana an-tserasera sy ny kisarisary. Ny ataon'ny rindrambaiko mifantoka amin'ny BIM amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny fandefasana fotoana tena izy, mifandraika amin'ny toe-java-misy ara-jeôgrafia, mamaly ireo fizotra mifamatotra amin'ny maodelim-pandraharahana sy ny fantsom-pifandraisana ampiasain'ny finday, dia porofon'ny halaviran'ny tolotra indostrialy ny filan'ny mpampiasa.
Sokajy sasany amin'ny revolisiona nomerika teo aloha
PC - CAD - PLM - Internet - GIS - mailaka - Wiki - http - GPS
Ny fanavaozana tsirairay dia samy manana ny mpanaraka azy, izay mifamatotra amin'ny maodely iray nanova indostria samihafa. Ny PC dia artifact izay nanova ny fitantanana antontan-taratasy ara-batana, ny CAD dia nandefa ny latabatra ny latabatra fanaovana sary sy ny artifact an'arivony izay tsy nety tao anaty vatasarihana, ny mailaka elektronika dia nanjary fitaovana nomerika amin'ny alàlan'ny fifandraisana mahazatra amin'ny fomba ofisialy; izy rehetra dia niafara tamin'ny fifehezana ny fenitra miaraka amin'ny fanekena manerantany; farafaharatsiny raha ny fahitan'ny mpamatsy azy. Ireo fanovana ireo tamin'ny revolisiona niomerika teo aloha dia nifantoka tamin'ny fampidirana lanja amin'ny fampahalalana ara-jeografika sy alphanumerika, izay nampandeha ny ankamaroan'ny orinasa ankehitriny. Ny maodely nandehan'ireo fanovana ireo dia ny fifandraisana eran-tany; izany hoe ilay protokol http izay tsy mbola azontsika esorina mandraka androany. Ireo fandraisana andraikitra vaovao dia nanararaotra ny fampahalalana, ny fifamatorana fifandraisana ary namadika azy ireo ho fomba amam-panao kolontsaina vaovao hitantsika ankehitriny hoe Uber, Airbnb, Udemy, Netflix.
Saingy ankehitriny, eo am-baravaran'ny revolisiona nomerika vaovao isika, izay hanimba izany rehetra izany.
Block Chain - 4iR - IoT - Digital Twin - Data lehibe - AI - VR
Raha toa ny teny vaovao dia fanafohezana ny lamaody tenifototra fotsiny, tsy azontsika lavina fa eo am-baravarana ny revolisiona indostrialy fahefatra, mifototra amin'ny fitsipi-pifehezana maro. Mampanantena ny Internet amin'ity indray mitoraka ity fa mbola ho betsaka kokoa; manararaotra ny zava-bita rehetra hatreto, fa ny mandika paradigma izay tsy mahatratra ny haavon'ny tsena izay tsy mampifandray solosaina sy finday intsony; fa kosa, mampifandray ny asan'ny zanak'olombelona amin'ny toe-javatra misy azy ireo.
Tsy misy na dia oracle iray aza izay afaka miantoka izay ho endrik'ilay toe-javatra vaovao, na dia manome soso-kevitra betsaka ho antsika aza ny feon'ireo mpitarika ny indostria lehibe, raha toa isika ka manana fijoroana ho pragmatika sy porofon'ny fahamatorana. Ny fahitana, ny habaka ary ny fahafaha-manaon'ity revolisiona vaovao ity dia manana fitongilanana manararaotra an'ireo manantena ny hivarotra ankehitriny. Ny governemanta, raha ny mason'ny mpitondra azy dia mazàna mahita izay mety ho asan'ny orinasa na ny fifidianana ny toerana misy azy ireo ao anatin'ny fotoana fohy, saingy amin'ny fotoana fohy, mampihomehy, ireo mpampiasa tsotra, liana amin'ny filan'izy ireo, no manana ny farany teny.
Ary na dia mampanantena lalànan'ny fiaraha-miaina tsaratsara kokoa aza ny sehatra vaovao, kaody tsy andoavam-bola miaraka amina iray ihany, ny fitohizan'ny tontolo iainana, ny fenitra nateraky ny marimaritra iraisana; Tsy misy olona manome antoka fa ny mpilalao sarimihetsika toa ny governemanta sy ny akademia dia hiatrika ny anjara asany amin'ny fotoana mety. Tsia; tsy misy afaka maminavina hoe hanao ahoana izany; ny zavatra hitranga ihany no haintsika.
Twin nomerika - Ny TCP / IP vaovao?
Ary satria fantatsika fa hitranga amin'ny fomba izay mety tsy ahitantsika ny fiovana miandalana dia ilaina ny miomana amin'izany fanovana izany. Fantatsika fa amin'ity tranga ity dia tsy azo ihodivirana ny fahamalinana sy ny marimaritra iraisana ho an'ireo izay mahatakatra ny fahatsapana ny tsena mifamatotra eran'izao tontolo izao ary izay misy sanda fanampiny dia tsy hita taratra fotsiny amin'ireo mari-pamantarana ny sandan'ny tahiry fa koa amin'ny valin'ny mpanjifa miha manana fahefana. amin'ny kalitaon'ny serivisy. Ny fenitra dia tsy isalasalana fa handray ny anjara asany tsara indrindra amin'ny fiantohana ny fandanjana eo amin'ny famoronana famoronana ny indostria sy ny fitakian'ny mpampiasa farany.
Ny Twin Digital dia maniry ny hametraka ny tenany ao anatin'ny filozofian'ity fanovana nomerika vaovao ity.
Inona no tanjon'ny protocol vaovao?
Mba hahatonga ny http / TCIP ho lasa protokolon'ny serasera mahazatra, izay mijanona ho manan-kery ankehitriny manoloana ny fivoaran'ny teknolojia sy ny fiarahamonina, dia tsy maintsy nandalo dinganà fitantanana, fanavaozana ary demokrasia / fanararaotan'ny mpampiasa izy mahazatra tsy fantatra. Amin'ity lafiny ity, ny mpampiasa dia tsy nahalala adiresy IP mihitsy, tsy ilaina intsony ny manoratra www, ary ny motera fikarohana dia nanolo ny filana manoratra http. Na eo aza izany, na eo aza ny indostria manontany ny fetran'ny zokiolona ao ambadik'io fenitra io, dia izy ihany no mahery fo nanaparitaka ny endrika fifandraisan'ny serasera manerantany.
Saingy mihoatra ny fampifandraisana ny solosaina sy ny telefaona ilay protokoleta vaovao. Ny serivisy rahona ankehitriny, fa tsy mitahiry pejy sy angona, dia ampahan'ny asan'ny olom-pirenena, governemanta ary orinasa isanandro. Izy io dia iray amin'ireo antony nahatonga ny fahafatesan'ilay protokol voalohany, miorina amin'ny adiresy IP, satria ankehitriny dia ilaina ny mampifandray ireo fitaovana izay avy amin'ny milina fanasan-damba izay mila mandefa hafatra fa vita ny famolavolana ny akanjo, amin'ireo sensor amin'ireo tetezana izay Ny fanaraha-maso ny fotoana tena izy dia tokony hitaterana ny toetranao havizanana sy ilanao fikojakojana. Ity dia ao anaty kinova ho an'ny tsy fahalalana, ilay antsointsika hoe internet momba ny zavatra; izay protokolopera vaovao no tsy maintsy mamaly.
Ny protokolota vaovao, raha te-ho fenitra izy, dia tsy maintsy mahay mampifandray mihoatra ny fampahalalana amin'ny fotoana tena izy. Amin'ny maha-ambaratonga azy dia tokony hampidirina ao ny tontolo iainana efa misy sy vaovao, ary koa ny fampiasa amin'ny tontolo voajanahary sy ny serivisy omena amin'ny lafiny sosialy, toekarena ary tontolo iainana.
Raha ny fahitana ny raharaham-barotra, ny fenitra vaovao dia tokony hitovy amin'ny fanehoana dizitaly ny fananana ara-batana; toy ny mpanonta, trano, trano, tetezana. Fa mihoatra ny maodely azy, antenaina fa hampisy lanjany ny asa; mba hahafahany mandray fanapahan-kevitra tsara kokoa noho izany ary hahita vokatra tsara kokoa.
Raha ny fomba fijery firenena dia mila mamorona rafi-pitondran-tena ny maodely ifandraisany maro ny protocol vaovao; sahala amin'ny fananan'ny firenena iray, mba hamoahana lanja bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fampiasana izany data ho an'ny tombontsoam-bahoaka.
Raha ny fijerin'ny vokatra no jerena, ny protokolola vaovao dia mila mahay manara-penitra ny tsingerin'ny fiainana; notsorina tamin'izay hitranga amin'ny zavatra rehetra, fitaovana toa ny làlana, teti-dratsy, fiara; intangibles toy ny tahiry fampiasam-bola, drafitra stratejika, kisarisary gannt. Ny fenitra vaovao dia tokony hanatsotra fa izy rehetra dia teraka, mitombo, mamokatra vokatra ary maty ... na miova.
Ny kambana nomerika dia maniry an'io protocol vaovao io.
Inona no antenain'ny olom-pirenena amin'ny revolisiona nomerika vaovao.
Ny toe-javatra tsara indrindra momba ny fomba hisehoan'izany amin'ny toe-piainana vaovao, dia ny tsy hieritreretana momba izay ambaran'i Hollywood amintsika, momba ny olona ao anatin'ny trano iray tantanin'ny elita izay mifehy ny asan'ny sisa tavela amin'ny tontolon'ny apokaliptika izay tsy ahafahana mamaritra ny tena zava-misy. ny fanalan-jaza; na amin'ny lafiny hafa, fametrahana nofinofy izay misy tonga lafatra tokoa ny zava-drehetra ka very ny fihetseham-pon'ny mpandraharaha olombelona.
Fa misy zavatra iray tsy maintsy ho azo sary an-tsaina ny hoavy; Farafaharatsiny ho an'ity lahatsoratra ity.
Raha hitantsika amin'ny hetahetan'ny mpisera roa lehibe ao anaty drafitra birao aoriana, izay hiantsoantsika hoe Stakeholand ireo. Mpandray anjara iray izay mila mailo tsara handray fanapahan-kevitra tsara kokoa, ary olom-pirenena mila serivisy tsara kokoa hamokatra kokoa; mahatadidy fa ity mpandray anjara ity dia afaka mizaka ny zom-pirenena tsirairay na ao anaty vondrona mihetsika avy amina andraikitra imasom-bahoaka, tsy miankina na mifangaro.
Ka momba serivisy no resahina; Golgi Alvarez aho, ary mila manangana fanitarana amin'ny rihana fahatelo amin'ny tranoko; izay namboarin'ny raiko tamin'ny 1988. Amin'izao fotoana izao, andao hadino ireo teny, marika na fanafohezana ireo izay nanary ity scenario ity ary ndao hajanona ho tsotra fotsiny.
Niasa i Juan Medina fa ekena ity fangatahana ity amin'ny fotoana fohy indrindra, amin'ny vidiny ambany indrindra, miaraka amin'ny fangaraharana lehibe indrindra, ny fizahana ary miaraka amin'ny fangatahana sy mpanelanelana ambany indrindra.
Ny manam-pahefana dia mila manana fampahalalana ampy hanekena tsara ity fanapahan-kevitra ity, mba hanarahana izay, inona, rahoviana ary aiza no mandefa fangatahana: satria rehefa ekeny io fanapahan-kevitra io dia tsy maintsy manana farafaharatsiny farafaharatsiny fanovana natao. , miaraka amin'ny traceability mitovy amin'izay natolony. Izany dia mamaly ny fiheverana fa «Ny fivadihana ny fotodrafitrasa manan-tsaina, ny fomba fananganana maoderina ary ny toekarena nomerika dia manome fotoana hampivoarana ny fahasalaman'ny olom-pirenena".
Ny sandan'ny vola aseho ao amin'ity tarehin-javatra ity, mihoatra ny fananana modely virtoaly virtoaly amin'ny tontolo ara-batana manontolo; kosa, miresaka momba ny fananana modely mifandray isika, araka ny tanjon'ny mpanelanelana.
Ny olom-pirenena izay ilainy dia valiny (fomba iray),
izay manome alàlana dia mila misy fepetra (zospatial zoning),
mamaly endrika ny mpamorona (Modely BIM ho),
manamboatra valiny ny mpamorona iray (drafitra, teti-bola, drafitra),
ny mpamatsy izay mamaly ny lisitr'ireo fampidirana (famaritana manokana),
ny mpanara-maso izay mamaly amin'ny valiny farany (BIM ho modely vita).
Mazava fa ny fananana modely mifandraika dia tokony hanamora ny mpanelanelana, afaka manamboatra fanamarinana izay amin'ny tranga tsara indrindra dia ny fanompoana tena ho an'ny mpampiasa farany; Na farafaharatsiny, mangarahara sy azo zahana, nahena hatramin'ny dingana farany ambany. Amin'ny farany, ny zavatra ilain'ny olom-pirenena dia ny fananana alalana sy fananganana; raha ny governemanta kosa mankato araka ny lalàna mifehy azy ary mahazo ny mombamomba ny fanjakana farany. Noho izany, ireo fifandraisana misy eo amin'ireo maodelin'ny birao anoloana dia ao amin'ireo teboka telo ireo ihany, izay manome lanja.
Ny tompony dia nanatanteraka ny fananganana nantenainy, ny governemanta dia nanome toky fa ny asa dia notanterahina tamin'ny fanarahana ny lalàna ary tsy nisy ezaka lehibe azo antoka hitazomana ny vaovao farany. Fanahy iniana fotsiny ny variant.
Na dia ho an'ny mpanatanteraka aza, mpamolavola sy mpamatsy fitaovana dia sanda hafa; fa amin'ny lafiny mitovy, tokony hohatsotra ireo fifandraisana ireo.
Raha mahita azy amin'ny fomba maodely isika, ity fampiharana izay nataontsika tamin'ny fananganana ity dia azo hamarinina amin'ny fomba mitovy amin'izany: fivarotana fananana, fampindramambola, fangatahana indram-bola, fahazoan-dàlana hiasa amin'ny orinasa, fanararaotana ireo harena voajanahary, na fanavaozana ny drafitra fandrindrana ny tanàna. Ny variants dia amin'ny lafiny toy ny refy sy ny fomba fanatonana; fa raha manana modely domain mitovy izy ireo dia tokony ho afaka hifandray.
Ny kambana amin'ny dizitaly dia maniry ny ho modely ahafahan'ny mampifanaraka sy mampifandray ireo fisoloam-bidy maro samihafa, miaraka amin'ny sokajin-jaza isan-karazany, salan'isa ara-nofo sy fomba fanao.
Inona no azontsika antenaina amin'ny Fitsipika Gemini.
Ny ohatra teo aloha dia tranga tsotra ampiharina amin'ny fitantanana eo amin'ny olom-pirenena sy ny manampahefana; fa araka ny hita ao amin'ny fehintsoratra farany dia mila ampifandraisina ireo maodely samihafa; raha tsy izany dia vaky ilay rojo amin'ny rohy malemy indrindra. Mba hitrangan'izany dia ilaina ny fanovana nomerika ahitana ny tontolo voaorina amin'ny fomba ankapobeny, mba hahazoana antoka kokoa ny fampiasana, ny asa, ny fikojakojana, ny fandaminana ary ny fandefasana ny harem-pirenena, ny rafitra ary ny serivisy. Tsy maintsy mitondra tombony ho an'ny fiarahamonina iray manontolo, ny toekarena, ny orinasa ary ny tontolo iainana.
Amin'izao fotoana izao, ny ohatra manome aingam-panahy tsara indrindra dia ny UK. Miaraka amin'ny tolo-kevitr'ireo Fitsipika Gemini fototra sy ny tondrozotra misy azy; Saingy alohan'ny hametrahanay anarana ireo namana fa manohitra foana ny ankehitriny sy ny fahazaran-dratsin'izy ireo amin'ny fanaovana an'izany matetika dia manao ny zava-drehetra amin'ny fomba hafa saingy milahatra amin'ny fombafomba. Hatramin'izao, ny British Standards (BS) dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fenitra misy sehatra iraisam-pirenena; izay hajain'ny asan'ny fandraisana andraikitra ankehitriny toa ny i3P, ICG, DTTG, UK BIM Alliance.
Raha ny vokatr'izany eto amin'ny United Kingdom dia gaga isika amin'ny alàlan'ny fananganana Digital Framework Working Group (DFTG), izay nampitambatra ireo feo lehibe avy amin'ny governemanta, ny akademia ary ny indostria hanatrarana ny marimaritra iraisana momba ny famaritana sy ny soatoavina fototra. Torolàlana ilaina hiakarana ny fiovan'ny dizitaly.
Miaraka amin'ny fiadidiana ny fiadidiana an'i Mark Enzer, ny DFTG dia nanao sonia ezaka mahaliana amin'ny famoronana ny Framework izay manome antoka ny fitantanana mahomby ny fampahalalana amin'ny tontolo voaorina rehetra, ao anatin'izany ny fifanakalozana data azo antoka. Ity asa ity, dia misy antontan-taratasy roa:
Ny Fitsipika Gemini:
Ireo dia torolàlana momba ny soatoavin'ny "fahatsiarovan-tena" amin'ny rafi-pitantanana ny vaovao, izay misy fitsipika 9 natambatra ho famaky 3:
Tanjona: Fahasalamam-bahoaka, famoronana sanda, Fahitana.
Fahatokisana: fiarovana, fisokafana, kalitao.
Fampiasa: Federasiona, fanasitranana, fivoarana.
Ity dia drafi-drafitra ho laharam-pahamehana mba hamolavola ny rafi-pitantanana ny vaovao, izay misy renirano 5 izay mitazona ny maha-olom-dehibe an'i Gemini amin'ny fomba famindrana.
Ny tsirairay amin'ireto renirano ireto dia samy manana ny làlan'ny fanakianana, miaraka amina hetsika mifamatotra nefa mifampiankina; aseho amin'ny sary. Ireto ony ireto dia:
sehatra, miaraka amina lahasa 8 manakiana sy 2 tsy manakiana. Key satria ilaina ny famaritana azy io mba hampavitrika ireo mpampita.
Fitantanam-pitondrana, miaraka amina lahasa 5 manakiana sy 2 tsy manakiana. Io no riaka misy fiankinan-doha kely indrindra.
iraisana, misy lahasa 6 manakiana sy 7 tsy manakiana, io no be indrindra.
enablers, miaraka amin'ireo asa kritika 4 sy 6 tsy mitsikera, miaraka amin'ny fifandraisana be dia be amin'ny fitantanana fanovana.
Change, Asa 7 manakiana sy 1 tsy manakiana. Io no riandrano izay kofehy fitondra mandeha.
Araka ny fantatra avy amin'ity sehatra ity, dia tsy natao ho an'ny UK fotsiny ho toy ny Brexit fanovana nomerika azy manokana, na ny fitiavany ny fiara ankavia. Raha te hampiroborobo ny maodely mampifandray kambana nomerika manana tratry ny firenena ianao dia mila manangona zavatra mety hampifanaraka ny indostria, indrindra amin'ny lafiny fenitra. Ireto singa manaraka ireto dia miavaka amin'ity lafiny ity:
1.5 Fifanarahana amin'ny hetsika hafa.
Ny akronon'io singa io dia mihoatra noho ny ampy, hanajàna io filokana io; Fenitra ISO, fenitra eoropeana (CEN), fampifanarahana amin'ny Innovate UK, fananganana SMART, W3C, BIM UK, DCMS, i3P, DTTG, IETF.
4.3 Fifandraisana iraisam-pirenena.
Eto isika dia miresaka momba ny famantarana sy ny fitantanana lobby miaraka amin'ny programa, ny hetsika ary ny fotoana amin'ny toe-javatra iraisam-pirenena miaraka amin'ny synergies. Mahaliana fa efa voadinon'izy ireo ny fianarana ny fomba tsara any amin'ny firenena izay efa manandrana; ao anatin'izany ny mety hanamafisana vondrona vondrona fifanakalozana fifanakalozana iraisam-pirenena, ao anatin'izany i Australia, New Zealand, Singapore ary Canada.
Ny antontan-taratasim-behivavy antsoina hoe Fitsipika Gemini, mba hahatratrarana ny marimaritra iraisana amin'ireo lohandohan'ny indostrian'ny indostria, dia ho lasa «Cadastre 2014» tamin'ny faran'ny taona 2012, izay nametraka lafin-javatra phylophic ho an'ny fitantanana tany, izay natao taty aoriana Ny marimaritra iraisana dia miara-miasa amin'ny hetsika toy ny INSPIRE, LandXML, ILS ary OGC, lasa 19152 tamin'ny fenitra ISO-XNUMX, fantatra amin'ny anarana hoe LADM.
Amin'ity tranga ity dia hahaliana ny mahita hoe ireo mpitarika lehibe ao amin'ny indostrian'ny teknolojia izay nitondra ny modely ananany dia nahatratra ny marimaritra iraisana; Raha ny fomba fijeriko manokana dia izy ireo no zava-dehibe:
Ny vondrona SIEMENS - Bentley - Microsoft - Topcon, amin'ny fomba izay mamorona toe-javatra saika feno amin'ny tsingerin'ny Geo-Engineering; Misambotra, modely, famolavolana, fandidiana ary fampidirana.
Ny vondrona HEXAGON - fa manana vahaolana mitovy mitovy aminy miaraka amin'ny sehatra mahaliana ao anaty portfolio iray izay natokana ho an'ny fambolena, fananana, avana, fiarovana, fiarovana ary faharanitan-tsaina, fitrandrahana, fitaterana ary governemanta.
Ilay vondrona Trimble - izay mitazona ny fitoviana amin'ireo roa teo aloha, miaraka amin'ny tombontsoan'ny toerana sy ny alikaona miaraka amin'ireo antoko fahatelo, toy ny ESRI.
Ny tarika AutoDesk - ESRI fa amin'ny ezaka vao haingana dia mitadiava sarisary amin'ny tsena izay misy azy ireo.
Ireo mpisehatra hafa, izay manana ny laoniny manokana, modely sy tsena; amin'ireo tokony hazavaina amin'ny fandraisana anjara sy ny marimaritra iraisana. Ohatra, General Electric, Amazon na IRS.
Ka, toy ny nitondran'ny raiko ahy tany amin'ny rodeo hijerena ny fomba nanjakan'ny omby vavy ny omby, avy amin'ny peninay dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny mijery izay hitanay maso isika. Saingy azo antoka fa ho fifaninanana lehibe izy io, izay lehibe kokoa ny fahatratrarana ny marimaritra iraisana, ka ny fampifanarahana dia manome lanja bebe kokoa noho ny isa amin'ny kitapo.
Ny anjara asan'ny BIM amin'ny zaza kambana nomerika
Ny BIM dia nisy fiatraikany sy fitohizan-kevitra lehibe tao anatin'ny vanim-potoana lehibe, tsy satria manamora ny fitantanana nomerika ireo maodely 3D, fa satria fomba iray nifanarahan'ireo mpitarika lehibe ny sehatry ny maritrano io sy ny injeniera ary ny fananganana.
Indray, ny mpampiasa farany dia tsy nahalala zavatra maro mitranga any ambadiky ny fenitra; amin'ny maha-mpampiasa ArchiCAD azy izay afaka nilaza fa efa nanao izany izy talohan'ny niantsoana azy hoe BIM; marina ny ampahany, fa ny marika ho toy ny fomba mazàna amin'ny ambaratonga 2 sy 3 dia mihoatra ny fitantanana ny fampahalalana azo ovaina, ary mikendry ny hitantana ny fiasa sy ny tsingerin'ny fiainana tsy ny fotodrafitrasa ihany fa ny toe-javatra koa.
Dia tonga ny fanontaniana. Tsy ampy ny BIM?
Angamba ny tsy fitoviana lehibe indrindra amin'ny tolo-kevitr'i Digital Twins dia ny fampifandraisana ny zava-drehetra fa tsy fampifandraisana fotodrafitrasa fotsiny. Ny fisainana amin'ny toe-javatra manerantany mifandray dia midika hoe rafitra mpampifandray izay tsy voatery hanana maodely ara-jeografika. Noho izany, ao anatin'ny dingana vaovao fotsiny isika amin'ny fanitarana ny tontolon-kevitra, izay tsy hisy hanaisotra ny andraikitra notanterahiny ary hanohy hanatanteraka ny fomba fiasa BIM, fa zavatra avo kokoa no handray na hampiditra azy.
Andao isika hahita ohatra:
Rehefa nitady ny hitondra ny maodely Core Cadastre Domain Model ho amin'ny fenitra fitantanana ny tany i Chrit Lemenn, dia tsy maintsy nanao fifandanjana izy tamin'ny torolàlana avy amin'ny INSPIRE sy ny komity teknika momba ny fenitra jeografika. Ka na irintsika na tsia
Ao amin'ny tontolon'ny INSPIRE, ISO: 19152 no fenitra ho an'ny fitantanana cadastral,
Raha ny kilasy topografika an'ny LADM dia tsy maintsy manaraka ny fenitra ara-jeografika an'ny OGC TC211.
LADM dia fenitra manokana momba ny fampahalalana momba ny tany. Noho io antony io, na dia misy ny fenitra LandInfra aza dia tapaka miaraka amin'ny fitadiavana ny fahatsorana izy io, satria tsara kokoa ny manana fenitra ho an'ny fotodrafitrasa sy iray ho an'ny tany, ary mampifandray azy ireo amin'ny fotoana mampisy lanja ny fifanakalozana vaovao.
Noho izany, ao anatin'ny tontolon'ny Digital Twins, ny BIM dia mety hitohy ho fomba fiasa mifehy ny fenitra amin'ny fanahafana fotodrafitrasa; haavo 2, miaraka amin'ny pitsiny rehetra amin'ny antsipiriany ilain'ny famolavolana sy ny fananganana. Saingy ny fiasa sy ny fampidirana ny haavo 3, dia hitondra fironana tsotsotra kokoa mankany amin'ny fidirana ho an'ny sanda fanampiny ary tsy hiteny fa tsy maintsy hiteny amin'ny fiteny iray ihany ny zava-drehetra.
Hisy hiresaka betsaka momba azy; ny lanjan'ny angon-drakitra, famotehana ny sakana, fahalalana malalaka, ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa, ny famoronana mahomby, asa ...
"Ny fifandroritana ny fotodrafitrasa manan-tsaina, ny fomba fananganana maoderina ary ny toekarena nomerika dia mampitombo ny fotoana hanatsarana ny fiainana ny olom-pirenena"
Na iza na iza mahay mamondrona ny mpisehatra fototra ao ambadik'ity foto-pisainana ity, hahatakatra ny maha zava-dehibe ny soa ho an'ny besinimaro, ny toekarena, ny fiarahamonina ary ny tontolo ... dia hahazo tombony lehibe kokoa.
Previous Post«Previous FARO dia hampiseho ny haitao 3D fahitany ho an'ny geospatial sy ny fananganana amin'ny World World Geospatial Forum 2020
Next Post Tanàn-dehibe nomerika - ahoana no ahafahantsika manararaotra ny haitao toa ny atolotry SIEMENSmanaraka »